Singapore: Ady amin’ny fanamelohana ho faty · Global Voices teny Malagasy
Singapore: Ady amin'ny fanamelohana ho faty
Voadika ny 29 Marsa 2010 13:33 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, বাংলা, polski, 日本語, Italiano, 简体中文, 繁體中文, македонски, English
Yong Vui Kong, Malaiziana 21 taona, dia voaheloky ny Fitsaràna Avon'ny Singapore ho faty tamin'ny 2008 noho ny fanondranana zava-mahadomelina milanja 42,27g, sazy omena ireo izay mitàna maherin'ny 15g amin'io zavatra tsy ara-dalàna io. Nilaza izy fa vendrana ka voatarika tamin'ny fitondràna ireo zava-mahadomelina ireo. Niantso fampakarana fitsaràna izy nefa niteny ireo mpisolovava azy hanala izany, herinandro mialoha ny fitsaràna tamin'ny Aprily.
Tamin'ny Desambra tamin'ny taon-dasa, nisolo tena azy i M. Ravi, nomena alalana hanao fampakarana indray. Niteny ny Fitsaràna fa adidiny ny mihaino tohan-kevitra vaovao na aorian'ny fanakatonana ny raharaha ady heloka bevava aza, indrindra raha tafiditra ao ny fanamelohana ho faty.
Ny ankabeazan'ireo mpitoraka blaogy dia manohitra ny fanamelohana ho faty, ary milaza fa maro ireo firenena no efa niala tamin'izany ary tsy tokony ho voaheloka ho faty ny tanora.
Andrew Loh, mpitoraka blaogy teratany avy any Singapore, dia nanoratra tao amin'ny lahatsorany tao amina blaogim-panehoan-kevitra iray, The Online Citizen:
Firenena maro no efa niala tamin'ity fanamelohana ho faty ity. Manana rehareha koa ireo firenen-drehetra. Nefa mety nomen'ireny firenena ireny toerana ambony kokoa ny ain'olombelona noho ny rehareham-pirenena – indrindra rehefa misy antony manery azy hanao izany.
Ary amin'ity fanamelohana ho faty any Singapore ity, tsy maintsy misy antony tsy maintsy hamerenana handinihana io lalàna io.
Nanoratra Rachel Zeng, Singaporeana mafana fo mpitoraka blaogy :
Na izany aza, manantena aho fa ny maha-olombelona sy ny lojika misy dia hanampy ireo mpitsara hahita fa mbola manana anjara famelàna io tovolahy io hanonerany ny heloka be vitany – izay tsy fantany akory raha tsy notenenina izy fa tsy “maivana” toy ny sigara ny rongony “heroine”
Nanoratra i Xue Jianyue, Singaporeana mpitoraka blaogy :
Ny fanasaziana an'i Yong Vui Kong dia tsy hamaha velively ny olana momba ilay mpanondrana mampiasa ny olona amin'izao taonany izao mba hanaparitahana zava-mahadomelina tsy an-kiato, satria ny olona toa an'i Kong, mahantra, tsy mahatsiaro tena ary kivy tamin'ny fiainana, dia hita foana eny amin'ny fiaraha-monina ary voatarika amin'ny fitaterana zava-mahadomelina.
Manampy koa izy fa tsy tokony hanefa ny vidin'ny “tsy fahalalàny” ny zatovo:
Tsy mitovy ny olona iray manatanteraka ny asa malotony am-pahalalàna izay vokany sy ny olona iray tsy mahalàla ny vokany. Tsy tokony ho maika hanasazy azy ireo amina sazy mitovy isika.
Nanoratra Terence Lee, Singaporeana mpitoraka blaogy :
Dia maninona raha meloka ilay olona? Tsy misy dikany ny fanasaziana olona tsy mahay zava-mahadomelina nefa ny mpanjakany mbola maniraka olon-kivy iray hafa hanondrana zava-mahadomelina.
Ary nahoana no sazy mahery toy izany? Moa ny fanondranana zava-ahadomelina mitovy amina heloka lehibe toy ny vono-olona, ka samy mendrika ny hohelohina ho faty?
Aiza no fahamarinana amin'izany?